Kedu ihe bụ Nkwado Mgbasa? Olee Otú I Si Azụlite Ya? | Martech Zone
Tọzdee, Machị 9, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ka m na-eleghachi anya na afọ iri gara aga nke ndị ahịa nke ụlọ ọrụ nke anyị, ọtụtụ ndị ahịa abịala ma laa onye anyị zutere n'amaghị ama site na mbọ ahịa ahịa anyị na-abata. Agbanyeghị, ntọala azụmaahịa anyị bụ ire ahịa ọnụ site n'aka ndị ahịa ahụ anyị rụpụtara nsonaazụ kemgbe afọ. N'ezie, atọ n'ime amụma anyị na-arụ ọrụ ugbu a metụtara ndị ahịa gara aga nke anyị na ha rụkọrọ ọrụ.
Ọ bụghị ihe ijuanya na ndị na-akwado akara nwere 50% na-enwekwu mmetụta na mkpebi ịzụta karịa ka ndị ahịa na-ahụkarị yana 90% nke ndị na-azụ ahịa na-akọ na nkwanye okwu (WOM) na-eduga ná mmetụta nke mkpebi ịzụta ha. N'ezie, na 20 ka 50% nke mkpebi niile ịzụrụ, Okwu-Ọnụ bụ isi ndu
Nkwado na-adọta puku ijeri $ 6 nke mmefu ndị ahịa kwa afọ
Kedu ihe bụ Nkwado Mgbasa?
Na ahia, a ika akwado bụ mmadụ, onye ọrụ, onye na-agbanwe agbanwe, ma ọ bụ onye ahịa na-ekwu okwu ọma banyere akara ma ọ bụ ngwaahịa, na-ebute ozi ọma nke ọnụ (WOM) gbasara akara ahụ na netwọkụ ha.
Gịnị bụ Nkwado Ndị Ahịa?
Iji gbaa ụdị nkwado ume, ụdị na-agbaso ọdịbendị nke metụtara ndị ahịa, na-enye ahụmịhe ndị ahịa ka elu. Ihe si na ịkwado ndị ahịa abụghị naanị mmụba na njigide ma ọ bụ ọnụ ahịa ndị ahịa, ọ na-ewepụta nloghachi na itinye ego na ndị ahịa ahụ ndị na-akwado akara.
N’ezie, ọghọm bụ na enweghere ọdịiche dị ukwuu ebe ndị azụmaahịa anaghị arụ ọrụ dị mma nke ịchọpụta ma ọ bụ ịchọ enyemaka nke ndị na-akwado akara ngosi. Ihe karịrị ọkara nke ụlọ ọrụ niile amaghịdị ndị ndị na - akwado ha. JitBit etinyela ihe omuma a, Ihe 15 Mere Brand Advocacy bụ ihe ndabere nke azụmahịa gị, na-ekerịta niile nke ins-na-outs nke ika akwado na-emepe emepe gị onwe gị ahịa mmemme mmemme.
Ayszọ iji zụlite Mmata Branddị
Gbado anya na mmekọrịta gị - kedu ihe na - eme ka onye ahịa nwee ịhụnanya maka akara gị? Ngwaahịa dị mma, ezigbo ọrụ ndị ahịa, yana ahụmịhe na-agbanwe agbanwe.
Ije Ozi na ọsọ - mgbe ị na-azụ ihe n'ịntanetị, 71% nke ndị ọbịa na-atụ anya enyemaka n'ime nkeji 5. Nye enyemaka mgbe ndị ahịa gị chọrọ.
Kekọrịta ihe ịga nke ọma - mee ka nzaghachi ziri ezi na ihe ịga nke ọma nke ndị na - akwado ugbu a - nyochaa atụmatụ na mgbasa ozi, kesaa nsonaazụ n'ihe ọmụmụ, ma kpọọ ndị ahịa gị oge niile.
Nye ndị ahịa ụgwọ ọrụ - nye ihe nlere n'ime ngwaahịa / ọrụ ọhụụ, kwado ihe omume ịkpọ oku pụrụ iche, zipu onyinye na-enweghị atụ, mepụta mmemme iguzosi ike n'ihe ma nye ọrụ VIP.
Iju ndị ahịa anya - ju ndị ahịa na-eguzosi ike n’ihe anya mgbe ha na-atụghị anya ya, ha ga-ekwukwa banyere ihe ịtụnanya, na onye zitere ya. O nwere ike ịbụ ihe ọ bụla site na ndetu ị na-ekele gị maka mmelite ndị akwụghị ụgwọ.
Ike na-akwado - ndị na-ahụ n'anya na-eto ụdị ụdị ọkacha mmasị ha. Praisedị otuto kachasị mma ha nwere ike ịnye bụ ntụpọ. Onyinye na-akwado ihe mkpali iji zipu azụmahịa ọhụrụ n'ụzọ gị.
Cheta oge pụrụ iche - izipu ndị ahịa kaadị ma ọ bụ onyinye na ụbọchị pụrụ iche dịka ekeresimesi ma ọ bụ ụbọchị ọmụmụ ha bụ ụzọ dị mfe iji mekwuo njikọ nke onwe ha na ika gị.
Were aka ma mee nzaghachi - jụọ ndị ahịa maka nzaghachi, ma mee ya. Ndị ahịa na-abụ ndị nkwado ma ọ bụrụ na ọ dị ha ka a na-anụ nzaghachi ha ma na-eji ihe ha tinyere akpọrọ ihe.
Kwee ekele, ọbụlagodi na ndị na-ekwujọ gị - mara ma kelee nzaghachi niile, ọbụlagodi na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ndị ahịa enweghị obi ụtọ na-eche na ha bara uru, ha ga-arapara ogologo oge.
Echefukwala ilele Jitbit! Sistemụ tiketi ha nadesdesk nwụrụ anwụ dị mfe, dị ịtụnanya ma na-ewe sekọnd iji melite.
Tags: ntinyeika akwadoika akwadoiwu ụlọịkwado ndị ahịajitbit